कंगना रनावतमाथि मुकेश खन्नाको प्रहार
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनावतका विरुद्ध भारतका विभिन्न भागमा एफआईआर दायर गरिएको छ ।
विवादास्पद बयान दिइरहने कंगनामाथि अब कलाकारहरूको आक्रोशित हुन थालेका छन् । यसैबीच मुकेश खन्नाले कंगनाको पुरस्कार समेत फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘कंगनाले भारतको स्वतन्त्रता भिक्षामा प्राप्त भएको भन्नु ठीक हो ? उनको बयान चाप्लुसीबाट प्रेरित र केटाकेटी पाराको छ । यो पद्मा अवार्डको साइड इफेक्ट हो । सन् १९४७ मा हामीले स्वतन्त्रता पाएका थिएनौं भने ६० वर्ष गुलामीमा बाँचेका हौं त ? चन्द्रशेखर आजाद र सुभाषचन्द्र बोस जस्ता क्रान्तिकारीहरूको अपमान गर्ने बयान आयो । अंग्रेजहरूलाई तर्साउन क्रान्तिकारीहरूको भूमिका छ । तपाईंसँग यस्तो बोल्ने अधिकार छैन ।’
दीपिका पादुकोणको फिल्म गहराइयांको ट्रेलर सार्वजनिक, बोल्ड सीन भरपूर (भिडियो)
बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको फिल्म गहराइयांको ट्रेलर बिहीवार सार्वजनिक भएको छ । फिल्ममा दीपिका बाहेक सिद्धान्त चतुर्वेदी र अनन्या पाण्डे पनि छन् । ट्रेलरमा दीपिका र सिद्धान्तका हट रोमान्टिक ...
बलिउडमा यतिखेर निर्माण हुन लागेको चलचित्र ‘रामायण’को चर्चा छ । यस चलचित्रमाा भगवान रामको भूमिका कसले निभाउला ? भन्ने विषयलाई लिएर अहिले यसबारे सवत्र चासो भएको हो । निर्माता म...
सुवर्णको ‘म’ मा नरेनको ‘इन्ट्री’
पछिल्लो समयका ब्यस्त अभिनेता नरेन खड्का ‘म’ नामक फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन् । सुवर्ण थापाको निर्देशनमा सोमबारदेखि काठमाडौमा सुटिङ सुरु भएको फिल्ममा नरेन प्रमुख भूमिकामा रहेका छन् । कान्तिपुर फिल्म ए...